Misaona ny fanabeazana sy soratra : nodimandry Rtoa Juliette Ratsimandrava | NewsMada
Misaona ny fanabeazana sy soratra : nodimandry Rtoa Juliette Ratsimandrava
Tamin’ny faramparan’ny taona 2015 no nanomboka tsy salama Rtoa Juliette Ratsimandrava. Omaly maraina tokony ho tamin’ny 7 ora, nindaosin’ny fahafatesana ity andrarezin’ny soratra sy ny fanabeazana ity. Mpikambana mahefa ao amin’ny Akademia malagasy izy. Filohan’ny sokajy voalohany « Haikanto sy hailaza ». Tale jeneralin’ny foibe momba ny teny an’ny Akademia malagasy. Mpampianatra mpikaroka eny amin’ny oniversiten’Antananarivo. Mpahay tantara.
Nanao fikarohana maro ity « Oloben’ny teny sy ny soratra » ity. Anisan’ny goavana indrindra amin’izany ny nivoahan’ny « Rakibolana Rakipahalala » izay izy no nitarika ny ekipa nanatontosa izany. Boky lehibe ahitana pejy hatrany amin’ny 1144. « Efa tapitra tanteraka izy io amin’izao », hoy i Hajaina Naomy, filohan’ny Havatsa-Upem.
Ho an’ireo mpiara-miasa aminy sy ny olona mahafantatra azy, olona niaina tao anaty fahatsorana izy. Sariaka sy be fitiavana. Tia mifanakalo hevitra. Manome sosokevitra sady mandray am-pitiavana ny teny lazain’ny olona miresaka aminy.
Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviany manontolo ny Gazety Taratra.